အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ | Page 2
ပေးကမ်လှူဒါန်းခြင်းဆိုသည်မှာ December 10, 2009
ဘာသာကြီးများ၏ အယူဝါဒနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
Filed under: ဘာသာလေးရပ် — amayaphay @ 11:54 am
လမ်းအားလုံး ရောမမြို့သို့ရောက်၏ဟု အလွယ်ဆိုတတ်ကြပေမယ့် တမလွန် ခရီးသည် မျက်မြင်ရသော ရောမမြို့သို့သွားရာ လမ်းခရီးနှင့်လုံးဝမတူပါ။ သင်လုံး ဝမရောက်ဖူးသည့်နေရာသို့ လမ်းပြမြေပုံကိုကြည့်ပြီး ရောက်နိုင်သည်ဆိုပါက ကမ္ဘာပေါ် တွင် လမ်းပြဆိုသည့် အလုပ်လုံးဝရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ မျက်မြင်ရသော လောကကြီး၌ ပင် လမ်းပြလိုအပ်လျှင် မျက်မြင်မရသော တမလွန်ခရီး အတွက် အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါမည်နည်း။ တမလွန်ခရီးကို တမလွန်ကမ္ဘာမှလာသော အရှင်ကသာလျှင် လမ်းပြပေး နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သေပြီး ဘယ်ကိုရောက်မည်ဆိုတာ သေသောအခါမှသာ လျှင်အတိအကျ သိမည်မို့ သေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်သောအရှင်က ပြသောလမ်းမှ သာလျှင် တိကျပေ လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သော အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ယေရှုတစ်ပါး တည်းသာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။ သင်မရောက်ဖူးသောနေရာသို့ သင်၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကိုအပ်ပြီး သင်မသိကျွမ်းသော လမ်းပြနှင့် ခရီးသွားလျင် စိုးရိမ်မှုကင်းသော စိတ်ချရာလမ်းခရီးဖြစ်ပါတော့မည်လား။ ယနေ့သင့်တမလွန်ခရီးအတွက် စိုးရိမ်မှု ကင်းလျက် စိတ်ချရာလမ်းပြကိုရပြီးပါပြီလား။
ကျွန်တော့်အိမ်ကို အဘယ်ကဲ့သို့သွားရမည်၊ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ဘာတွေရှိ သည်ကို သင်သိနိုင်ပါသလား၊ သို့သော် ကျွန်တော့် အိမ်ကို ဘယ်လိုသွားရပြီး အိမ်မှာ ဘာတွေရှိသည်ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်သာ အသိဆုံဖြစ်၍ ကျွန်တော်ပြောပြမှသာ သင်သိနိုင်သလို ကျွန်တော် ပြောပြသော လမ်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်တော့်အိမ်သို့ ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်း၎င်း တမလွန်ခရီးနှင့် ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်းကို တမလွန်ကမ္ဘာမှလာသော ယေရှုပြောသောလမ်းသည်သာ စိတ်ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါ ပေသည်။
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:54 am
(၁) အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း (လက်ဝါးကားတိုင်တရားနှင့် ဘုရား၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာဖြင့်ပြုပြင်ပေးမှု)
ထိုပြောင်းလဲခြင်းသည် ဘုရား၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဘုရား၏အမြင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာတရားအောက်တွင် အသက်ရှင်စဉ် လူဟောင်းဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတရားအောက်သို့ ရောက်လာသောသူသည် လူသစ်ဖြစ်ပါသည်။ လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ (၂ကော၅း၁၇) ထိုကျမ်းချက်သည် အာဒံမှဆင်းသက်လာသော လူဟောင်းမှ ယေရှု၌ လူသစ်ဖြစ်လာခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
ကားတိုင်ထက်မှ နောင်တရသောလူဆိုးကြီးက မိမိသည်အပြစ်သားဖြစ်ပြီး၊ ယေရှုသည် အပြစ်ကင်းလျက် ၄င်းကို ကယ်တင်နိုင်သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ လူများတို့က ယေရှုတန်ခိုးနိမိတ်များစွာပြုစဉ် ယေရှုကို လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသော်လည်း လူဆိုးကြီး၏ ယုံကြည်ခြင်းက ကားတိုင်ထက်မှ သေအံ့ ဆဲဆဲ မချိမဆန့်ခံနေရသော ယေရှုအား လက်ခံယုံကြည်ခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၄င်း၏ ယုံကြည်ခြင်း အဘယ်မျှလောက် ကြီးမားသည်ကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုလူဆိုးကြီးအား လူ့အမြင်ဖြင့်ကြည့်ပါလျှင် လူဆိုး၊ အပြစ်သား၊ မဖြောင့်မတ်သူ၊ အဓ္ဓမလူအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးသောအခါ ဘုရား သခင်မှ ၄င်းအား လူသစ်၊ ဘုရားသား၊ ဖြောင့်မတ်သူ၊ ဘုရားအလိုကို ဆောင်သောသူ (မ ၇း၂၁) ကောင်းကင်နိုင်ငံသား အဖြစ်မြင်ပါသည်။
(၂) စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း ( သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ ပြုပြင်ပေးမှု)
ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတွင်ကျိန်းဝပ်ပြီး ဝိညာဉ်သဘော ရှိလာသော်လည်း ဇာတိသဘောလည်း ကျန်ရှိပါသေးသည်။ အကြောင်းမှာ ၄င်းတွင် အသွေးအသားရှိနေသေးခြင်း၊ လောကတွင်သာ နေရသေးခြင်း၊ နေရာမပြောင်းသေးခြင်းနှင့် ဘုရားက စာတန်ကို ငရဲသို့မချသေးဘဲ စာတန်အုပ်စိုးသော လောကကြီးထဲတွင် အသက်ရှင်နေရ ပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဇာတိစိတ်သဘောနှင့် ဝိညာဉ်စိတ်သဘော အမြဲတမ်း လွန်ဆွဲခြင်းခံနေရသေးသော သူဖြစ်နေပါသည်။
အာဗြဟံ၏ အသက်တာတွင် ဇာတိအားဖြင့် ရရှိသော သားဣရှမေလကို ဘုရားက မောင်းထုတ်ခိုင်းပြီး ဘုရားအလိုတော်ဖြင့် ရသောသား ဣဇက်ကိုတော့ ဘုရားက တင်လှူပူဇော်ခိုင်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတိစိတ်သဘောကို ငြင်းဆန်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြပြုပြင်ပေးမှုကိုခံယူ၍ တနေ့တခြားဝိညာဉ် စိတ်သဘော ကြီးထွား ရင့်ကျက်လာသော ခရစ်ယာန် အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
(၃) အကျင့်ပြောင်းလဲခြင်း (သမ္မာတရား)
ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ လူ့ဖက်မှလုံးဝ ကြိုးစာအားထုတ်မှုမလိုပေမည့် ခရစ်ယာန် အသက်တာအတွက် ဝိညာဉ်အသီးများဖြင့် ဝေဆာစွာသီးပွင့်နေဖို့ ဘုရားကို အစွမ်းကုန် ကိုးစားလျက် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရန် ဘုရားရှင်မှ အလိုရှိပါသည်။ ဝိညာဉ်ပကတိ၏ အကျိုး ဟူမူကား ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း ပေတည်း။ (ဂလာတိ ၅း၂၂)
Filed under: ဘာသာလေးရပ် — amayaphay @ 11:42 am
ဟိန္ဒူဘာသာသာ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ်အမြင်
ဗြဟ္မဏခေါ် ဟိန္ဒူဘုရားသည် ပုံသဏ္ဌာန်မရှိ၊ အကောင်အထည်ဖေါ်၍မရ၊ ဂုဏ်တော်ဖေါ်၍မရသော ထာဝရရှိသည့် ဘုရား ဖြစ်၏။ သုံးပါးမကသန်းပေါင်း များစွာ သော ဘုရားငယ်များလည်းရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သခင်ခရစ်တော်ကို လူဝင်စားသောသူ များစွာအနက် တစ်ပါးဖြစ်၏။ ယေရှုသည်ဘုရားသားတော်မဟုတ်၊ သာမာန်လူသာ ဖြစ်ပြီး လူသားများ၏ အပြစ်အတွက်အသေခံခဲ့ သည်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လောကတွင်အဆိုးနှင့်အကောင်း ‘ဒွန်တွဲနေ၏။ ကူညီမစမှု မှန်သမျှသည် အကောင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆီးတားနှောက် ယှက်မှုမှန်သမျှသည် ဒုစရိုက်ဖြစ်၏။ မိမိ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် မိမိ၏အကုသိုလ်ကို ချေဖျက်ခြင်းငှါမစွမ်းနိုင် ကြောင်းလည်း သိ၏။ ဤဘဝတွင် ကြိုးစား၍မရပါက နောင်ဘဝတွင် ဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ဖို့ဝတ်ပြုခြင်း၊ တရားထိုင် ခြင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ကြပါသည်။
Filed under: ဘာသာလေးရပ် — amayaphay @ 11:41 am
ဗုဒ္ခဘာသာ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ်အမြင်
တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားရှိခြင်းကို လက်မခံသကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်း လက်မခံပါ။ သခင်ယေရှုအားဗုဒ္ဓလောက် အရေးမပါသော ဆရာကောင်းတစ်ပါးအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူတို့၏ တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေသော အရာမှန်သမျှအပြစ်ဖြစ်ပြီး မိမိလွန်ကျူးသောအပြစ်အတွက် မိမိတွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။ ကောင်းရာဘုံသို့ရောက်ဖို့ မိမိ၏ပြုမူကျင့်ကြံအား ထုတ်မှု အပေါ်၌ သာတည်၏။
ဗုဒ္ဓသည်လည်း တမလွန်ကမ္ဘာမှ ကြွဆင်းလာသော ဘုရားလောင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ဗုဒ္ဓ၏တရားလမ်းသည်မခိုင်လုံဟု ဆိုနိုင် ပါသလား?
လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျင့်ခဲ့သည့် ပါရမီရှင် ဘုရားလောင်း ဖြစ်သည့်အတွက် မွေးမွေးခြင်း လမ်းထလျှောက်ကာ ငါသည် အကြီးမြတ်ဆုံး၊ အဦးဆုံး ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော်တို့သိရပါသည်။ ထိုမျှလောက်ကြီးမြတ်သောအရှင်ဖြစ်ရိုးမှန်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးပြီး စွန့်ထားခဲ့ရပါသနည်း။ အချို့ကလည်း တောမထွက်မှီအထိ လူထဲကလူဖြစ်သည်ဆိုလျှင် တောစထွက်စဉ် ရှစ်ဥသဘအကျယ်ရှိသောမြစ်ကြီးကို စီးမြင်းအားအမှတ်ပေးလိုက်သည်နှင့် လွှားကနဲ ခုန်လိုက်ရာ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ကိုရောက်လေ၏ဟုဆိုပြန်၏။ ဘုရားမဖြစ်မှီ ထိုတန်ခိုး ဘယ်ကရပါသလဲ။ လူသားထဲမှ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကာ ဘုရားဖြစ်လာသည့် လူသား ဘုရားဟုလည်း အချို့ကဆိုပြန်ရာ သို့ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဟောသည့် ငရဲ၊ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ နှင့် နိဗ္ဗာန်တို့ကို အဘယ်သူကဖန်တီး ချုပ်ကိုင်ထားပြီးဗုဒ္ဓ နှင့်ဘယ်လို ပတ်သက်မှု ရှိပြန်ပါသလဲ။ နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓသည် လူသားထဲမှ လူသားဘုရားဖြစ်၏ဟူ၍သာ ဆွေးနွေး ရာတွင် အဖြေထွက်သည့်အတွက် ဗုဒ္ဓသည်တမလွန်ကမ္ဘာမှလာသော အရှင် မဟုတ်ပါ။ဗုဒ္ဓ၏တရားလမ်း သည်လည်း လူသားထဲမှ လူသားချင်း ပြသောလမ်းသာလျှင် ဖြစ်ပါ သည်။ဗုဒ္ဓ၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလည်း ကျန်ခဲ့ပြီး သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော အရှင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသည် မကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်နှင့် တရားမှားပြသူဟု မဆိုလိုပါ။ ရွေးချယ်မှု အပိုင်းကသင့်အပိုင်း သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓအကြောင်း (ဘီစီ ၅၆၃-၄၈၃ ခန့်)
ဗုဒ္ဓသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဖက်ရှိ နီပေါနယ်စပ်အနီး ကပ္ပိလဝတ် မြို့တော်ကို အုပ်ချုပ်သည့် ဘုရင်တစ်ပါး၏ သားတော် ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်က တည်းကပင် လောကီစည်းစိမ်ကို တပ်မက်မှုမရှိပါဘဲ တရားကိုရှာ လိုသော သဘောသာ ရှိ၏။ အသက်တစ်ဆယ့် ခြောက် နှစ်အရွယ်တွင် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ပထမသားဦးကို ရချိန် အသက် သုံးဆယ်ခန့်တွင် တောထွက်ခဲ့ပါသည်။ ငါးနှစ်အတွင်း တရားကိုရရန် ပြင်းထန်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပြီး မရသည့်အဆုံး အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ဖြင့် ကျင့်ကြံ အားထုတ်ရာ လူသားတိုင်း ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပြီး နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်သော သစ္စာ တရားလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားတော်ကို သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်နဲ့ သိခွင့်ရခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ ကင်းငြိမ်းရာ သစ္စာတရားလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားတော်တို့ကို လှည့်လည် ဟောကြားခဲ့ပြီး နောက်လိုက်များလည်း ရှိလာကာ သက်တော်ရှစ်ဆယ် အရွယ်တွင် ပျံလွန်ခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓပျံလွန်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဂိုဏ်းငယ်လေးတစ်ခုအသွင်အဖြစ်သာ နှစ်ပေါင်း သုံးရာခန့် တည်ရှိ နေပါသော်လည်း ဘီစီ သုံးရာခန့်တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သော အာသောကဘုရင်မင်း နန်းတက်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုဘုရင်မင်းမြတ်သည် သူကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ရုံတင်မက သူ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုလည်း ကိုးကွယ်စေခဲ့ ပါသည်။ ‘ဒါတင်မက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်း သာသနာပြုများ စေလွှတ် ခဲ့ပါ သည်။ အာသောက ဘုရင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘုရင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်မခံဘဲ နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ အချို့တွင်တော့ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့ပြီး ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဗုဒ္ဓကို သက်ဝင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူလူပေါင်း သန်းလေးရာခန့် ပင်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဗုဒ္ဓကတည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာကို ပြန့်ပွါးဖို့ အဓိကလုပ် ဆောင်ခဲ့သူမှာ အာသောကဘုရင်မင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် မှတ် သားစရာ တစ်ခုအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓသည် မည်သည့်စာပေ ကျမ်းဂန် တစ်ခုကိုမျှ ရေးသား မထားခဲ့ပါ။ ဗုဒ္ဓလွန်ပြီး ၄၅၈ နှစ်အကြာမှ သီဟိုရ်ကျွန်း(သီရိလင်္ကာ)တွင် မင်းကြီနှင့် ရဟန်းများကပြန်လည်ပြုစု ရေးသားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျမ်းတို့ကို လူသားအစဉ် အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းအာဂုံဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟုလည်းဆိုထားပါသည်။
ယေရှုသည် ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်မြတ် ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြီးပြတ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အတွက် တမန်တော်မိုဟာမက်ကို ထာဝရဘုရားက စေလွတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟူသောအဆိုမှာ ဟုတ်မှန်ပါသလား?
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ပြုခဲ့သောအမှုနှင့် အဆိုအမိန့်အားဖြင့်သာလျှင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် သည်အဘယ်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ မောရှေကို ထာဝရဘုရားစေလွှတ်သောတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး နှင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ အားလုံးက လက်ခံကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ မောရှေသည် ထာဝရဘုရားစေလွှတ်သော တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း ထာဝရဘုရားနှင့် ဆိုင်သည့် သဘာဝလွန် တန်ခိုးနိမိတ်များနှင့် သက်သေများတို့က အခိုင်အမာရှိနေပါသည်။ သို့သော် မိုဟာမက်တွင် ထာဝရဘုရားနှင့် ဆိုင်သော အမှုအရာများနှင့် ပြုခဲ့သော သဘာဝလွန် တန်ခိုးနိမိတ်များမတွေ့ရလို့ ၄င်းသည် ထာဝရဘုရား စေလွှတ် သော တမန်တော်ဖြစ်ခြင်းကို လူအားလုံးကလက်မခံပါဘဲ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကသာ လက်ခံကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယေရှု ကို လူတို့ လက်မခံကြခြင်းမှာ ယေရှုသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ပြုခဲ့သောအမှုနှင့် အဆိုအမိန့်တို့ ခိုင်လုံစွာရှိပါလျက် ငြင်းပယ် ကြခြင်း သာလျင် ဖြစ်ပါသည်။